Dhambaal by Cabdiraxman (Xiddig) Maxammed Cabdulle (Paperback) - Lulu
By Cabdiraxman (Xiddig) Maxammed Cabdulle
You Save: $6.74 ( 75% )
Noloshu wey dhacdooyin badantahay. Dhacdooyinkaasina marba weji ayeey ku yimaadaan. Qaar wey ku murugo geliyaan. Qaarna wey ku farxad geliyaan. Qaar wey kaa oohiyaan. Qaarna wey kaa qosliyaan. Qaar wey ku xanuun geliyaan. Qaarna wey ku xiiso geliyaan. Qaar wey kaa yaabiyaan. Qaarna waad la qabsataa oo caadi ayeey kuu noqdaan. Si kastaba ha ahaatee, buugan yar waxa ku qoran sheekooyin gaa-gaaban oo ka sheekeynaya dhacdooyinka nolosha. Sheeko waliba waxa ay xambaarsantahay dhambaal ka mid ah dhacdooyinka nolosha.